Bulchiinsi nageenna naannoo Oromiyaa, jaarrolee biyyaa,qeerroo fi bulchoota godina Booranaa waliin rakkoo Mooyyalee irratti mariitti jira
Sadaasaa 23, 2018
Bulchiinsi nageenna Oromiyaa warra lafaa waliin Mooyyaletti rakkoo nagaa irratti mariitti jira
I/G/B/Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa,Kamaal Galchuu rakkoo lafaa irratti mari'achuuf Mooyyale jira
Mareen kuni kaleessaa kaasee itti fufaa ka jiru yoo tahu, hoogganaan Waajjira Dhimma Nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa, Kamaal Galchuu kaleessaa kaasuun angawoota Aanaa Mooyyaleefi Godina Booranaa waliin Mooyyaleetti mariirra jiru.
Maree kaleessaatiinis angawootni Godina Booranaa fi Aanaa Mooyyalee,jiraattonis Mootummaan gaaffii daangaa jiruuf murtee akka kennu gaafataniiru. Harras walgayiin kun itti fufee jiraattota naannoo waliin gaggeeffameera.
Walgahiin kaleessa jalqabe kun harras ka itti fufe yoo tahu, magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa’ee namoota lola kanaan qe’eerraa buqqa’aniis fala dhahuuf mareerra jiru.
Maree kana ka gaggeessaa jiran hoogganaa waajjira Dhimma nageenyaa Oromiyaa Obbo Kamaal Galchuu yoo ta’an kaleessa angawoota Godina Booranaa fi ka Aanaa Mooyyale waliin mariyachuu hoogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Aanaa Mooyyalee Obbo Boruu Huqqaa himanii jiru.
Rakkoon biraa ummanni himate fedhii bulchiinsii naannoo Somaalee godina Booranaa irraa lafa kutatee godina Daawwaa jedhee jaarrachuu fedhu. Bulchiinsii nagaa naannoo Oromiyaa ammoo lafa Oromiyaa irraa lafa fudhachuun hin taatu jedha.
Warra marii tana keessa oole keessaa tokko Abshiroo. Akka isiin jettutti waraani naannoo shanii hardhallee aanaa Areeroo karaa Waacilleetti makiinaa karaatti hadhee nama madeessee kaan ijjeese.
Namii baqetelleen gargaarsa argachuutti hin jiruu,bulchiinsii naannoo Oromiyaalleen baqataa kana dhufee hin ilaalle.
“Akka daangaan keenna nuu kabajamuu fi alaabaan naannoo shanii Oromiyaa keessaa bahu gaafanna.”Mooyyaletti hardhallee biirolee fi baankiin banaa miti.
Haleellaa dhiyeenya Mooyyaleetti nama 11 galaafatee 85 ol madeesse ka geessisan hidhattoota naannoo shaniitii jedhamus, maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta’e kaan ka ifaan beeksise tokkoo hin jiru.